Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Ndị egwuregwu bọọlụ France Hugo Lloris Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-enye Full Story of a Football Stopper kasị mara aha na aha njirimara; "Saint Lloris". Anyị Hugo Lloris Ụmụaka Akụkọ ya na Akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ihe ndị gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ihe mgbaru ọsọ ya ịkwụsị ikike ma ole na ole na-atụle Hugo Lloris Bio nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Hugo Lloris Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ Eziokwu -Ndụ mbido
A mụrụ Hugo Lloris na 26th ụbọchị nke December 1986 (ụbọchị ịgba ụda) na mpaghara ihu na nke anwụ na-acha, nke dị na Nice, France. A mụrụ ya na nne ya, Marie Lloris (ọkàiwu) na nna, Luc Lloris (onye na-elekọta ego). Ndị mụrụ ya bara ọgaranya.
Mgbe a mụsịrị ya, a kpọrọ ya "Hugo" n'ihi na nne na nna ya bụ ndị na-adọrọ mmasị na onye edemede France mara amara Victor Hugo. N'ịbụ ndị sitere na ndị nne na nna bara ọgaranya, Hugo amaghị amụma na ya ga-abụ onye na-elekọta ihe, ma ọ dịghị ma ọ bụghị ndị ezinụlọ ya.
Hugo Lloris tolitere n'azụ nne na nna ya kachasị amasị ya, ịgba chaa chaa ebe ọ nọ, dị ka ndị ezinụlọ ndị ọzọ ka esinyere egwuregwu ahụ ma nwee obi ụtọ na ya.
Ọ na-egwuri egwu ahụ ruo mgbe 13 dị afọ iri na isii, ọ nọkwa n'etiti ndị egwuregwu kachasị elu n'oge ọgbọ ya, ogo dị elu na ọkwa ndị ntorobịa nke France.
Hugo Lloris Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ Eziokwu -Ọrụ na Nchịkọta
Ọ bụ ihe kpatara ya, edere ya na kpakpando ... onye nwere ike ịkọ? Hugo malitere ịgba bọl na ndị ịgba chaa chaa ya nanị iji gbuo oge tupu ya amụọ ihe ọmụmụ nke ọ bụla. Ná mmalite, ọ malitere dị ka midfielder tupu ya agbalị ebe onye na-elekọta ihe nchebe iji kpuchie onye na-elekọta ha.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Hugo dị ezigbo mma na ọnọdụ goalie na onye na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ gwara nwanne ya nwoke, onye na-ahụ maka nchịkwa na Cimiez ka ọ bịa lee anya na onye na-eto eto na-amaghị ihe.
Mgbe CEDAC rịọrọ onye dị afọ isii ka ọ sonyere ọgbakọ ahụ, Hugo nwere obi ụtọ, ma ndị mụrụ ya anabataghị ya. Mgbe ha kwusiri ike, ha kwetara n'okpuru ọnọdụ. Na nwa ha ga-anọgide na-amụ ihe na klas ya ma bụrụ ezigbo nwa akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụghị nke egwuregwu. Otú ọ dị, Hugo nwere oge na-aga n'ịkụ bọl. Ọbụna ọ dị ka isi ike dị ka ndị mụrụ ya. O di nwute, ya na onye nna nna ya, onye na-agbasi ukwu n'egwuregwu football: o bu ya, bu onye nwuru nwa nwa ya nwoke rue n 'obodo Nice ka o lelee ma mee ka ndi otu ndi otu.
Ọ bịara oge mgbe ịhụnanya ya maka ịbụ onye na-agbanye mgbọrọgwụ agafewo miri emi. N'ụbọchị dị mma ma dị egwu, Hugo gwara GK Dominique Baratelli bụ onye France na Nice ka ọ bịa leta ha. Dominique Baratelli ama ama ọfiọk ke ini enye okodude ke Hugo. Mgbe ọ na-ekiri ya n'otu n'otu, ọ kwụsịrị mkpọchi ndị dị mkpa ma gwa Hugo ka ọ sonyere OGC Nice's Youth Academy. Mgbe ọ dị afọ iri, Lloris sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Nice.
Hugo jiri afọ 12 mee ihe na obodo nke obodo ya na ọmụmụ ihe na football; ọ dịghị mfe n'ihi na ndị mụrụ ya chọrọ ka ọ gaa ọmụmụ ihe na ụlọ akwụkwọ ọ bụla, ọ bụghị na Academy onye na-atụ aro awa ole na ole n'ịmụ ihe. E kwuwerị, ịgba chaa chaa bụ maka ịṅụrị ọṅụ; ọmụmụ na mahadum, nke ahụ ga-abụ ọdịnihu maka nwa mbụ ha! Otú ọ dị, Hugo chọrọ imezu ọchịchọ nke ya. O tinyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya mgbe ọ natasịrị Baccalauréat (sciences na maths).
Na 2008, mgbe ọ na-akpọ Nice, nne ya nwụrụ. Nanị ụbọchị abụọ mgbe ọ nwụsịrị, ọ nwetara nkwanye ùgwù mba n'ihi na ọ jụrụ ịhapụ ezumike ọnwụ nke onye njikwa Frédéric Antonetti, kama ịhọrọ igwu egwu na Nice. Lloris rụrụ ọrụ dị mma na egwuregwu ahụ n'agbanyeghị ọnọdụ.
Mgbe oge ọzọ siri ike nke dị na Nice, ịkọwapụta banyere ebe Lloris ga-egwu oge na-esonụ. O sonyeere Lyon n'otu afọ ahụ mama ya nwụrụ. Mgbe enwere nsogbu na Lyon, Tottenham were ohere ịbanye ya na 2012. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Hugo Lloris Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ Eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Hugo Lloris enwewo ihe ịga nke ọma n'èzí, ịlụ nwanyị ahụ mara mma. Di na nwunye ahụ zutere n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị mgbe Hugo nọ na-aga ịghọ onye nlekọta kachasị mma na France.
Ndị otu ahụ zutere na oche bench nke Nice na 2002 wee lụọ 10 afọ ole na ole. Ha na agbamakwụkwọ ha na St Francis Church de-Paule n'otu obere ememe na Nice. A mụrụ nwa ha nwanyị, bụ Anna-Rose, n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị. A mụrụ nwatakịrị ha, bụ Giuliana na 2014, obere oge tupu Lloris chaa France na 2014 World Cup.
A na-ahụ ụmụ nwanyị abụọ mgbe nile na-akwado Hugo na nkwụsị. N'ịbụ onye na-etolite, nwunye Hugo, Marine ejighị nlezianya elekọta egwuregwu ahụ di ya na-arụ n'egwuregwu. O kwuru na ... " mgbe ọ dị afọ iri na ụma, (ọ) enweghị mmasị na football ọ bụla. "
Ụbọchị ndị a, ị nwere ike ịchọta mmiri na mmiri mgbe ọ bụla na White Hart Lane n'oge Premier League, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla a na-ahazi France. Ndị inyom ndị France na-emekarị ya, gụnyere Jennifer Giroud na Ludivine Sagna.
N'agbanyeghị na LLris lụrụ di na nwunye kemgbe 2012, mmiri abụghị WAG. O nwere ogo na iwu na ego mmadụ. Ọ bụ ya nwe Manège en Sucre, ụlọ ọrụ na-eyi uwe nke na-emepụta akwa akwa maka ụmụaka site na ọnwa atọ na 12 afọ.
Hugo Lloris Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ Eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
A na-ahụkarị bọọlụ dị ka egwuregwu egwuregwu. Imirikiti egwuregwu na-akọrọ akuko banyere ihe nzụlite siri ike ma nwee egwuregwu ịkele maka iwetara ha akụnụba. Nke a abụghị ikpe banyere Hugo Lloris. Ọ bụ nwa nke ezinụlọ bourgeoisie nke na-ewere ndị si na football dị ka obere ego. Lloris toro nwa nke ndị isi na France. Nne ya nwụrụ anwụ bụ onye ọka iwu na nna ya bụ onye na-azụ ego. Ha abụọ bara ụba.
NNE: Gautier Lloris mụrụ 18 July 1995 bụ nwa nwanne nwanne Hugo Lloris. Ọ bụ ndị ọkà n'ịgba chaa chaa French nke na-egwu Gazélec Ajaccio na mbinye ego site na Nice, dịka ebe etiti. N'okpuru ebe a bụ foto nke Gautier. Ọ dị ka nwanne ya, Hugo.
Hugo Lloris Childhood Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ Eziokwu -Ndụ nke Onye
Hugo Lloris nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Hugo Lloris: Ọ bụ onye ọrụ, ịdọ aka ná ntị, nwere njide onwe onye na ezigbo onye ndú.
Hugo Lloris adịghị ike: Ọ pụghị ịbụ onye na-enweghị mgbaghara, na-eweda onwe ya ala.
Ihe Hugo Lloris nwere mmasị: Ọ na-enwe mmasị na Ezinụlọ, omenala, egwu na ịrụ ọrụ mma.
Ihe Hugo Lloris achọghị: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla.
Na nchịkọta, Hugo bụ maka oge na ọrụ. Ọ bụ omenala na mgbe ọ dị oke njọ. O nwere nnwere onwe dị n'ime ya nke mere ka ọ nwee ọganihu dị ukwuu ma na ndụ ya na ndị ọkachamara. Ọ dịghị eche banyere akụ na ụba nke nne na nna ya, kama na-agbaso ọdịmma ya. N'ikpeazụ, Hugo bụ njide njide onwe onye ma nwee ikike iduzi ụzọ maka otu ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ anyị bụ Hugo Lloris Childhood nke akụkọ na eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.